Tanjona ny hampahafantarana ireo vahoaka eny ifotony ny fomba fiasa sy fitantanana eo anivon’ny Boriborintany sy ireo zavatra mampiavaka azy. Natomboka tamin’ny fitsidihana ireo tranoheva 17 isa mandray anjara ny hetsika, ahitana ireo tolotra omen’ny Boriborintany fahenina sy ireo mpiray ombon’antoka ary ireo mpiara- miasa akaiky. Mifandrindra amin’ireo ny fifaninanana ara- panatanjahantena samihafa toy ny Basket-Ball ho an’ny sokajy lahy sy vavy, ny fifaninanana Tsikonina ho an’ny ankizy, ny fifaninanana hatsaram-bika sy hatsaran-tarehy… Anio sabotsy 17 jona dia hisy ny fifaninanana hazakazaka miainga eny Ambodivonkely hatreny Anosisoa misy ny Boriborintany. Hanolotra loka ho an’ireo telo voalohany kosa ny Orange Madagascar izay mpiara-miasa akaiky amin’ny Boriborintany sady mpanohana ofisialy ny hetsika. Nisy ihany koa fanolorana koveta ho an’ireo mpanasa lamba eny amin’ny fokontany araka ny fampanantenana nomen-dRamatoa Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana tamin’ny fandalovany teny an-toerana. Nambaran’Atoa Razafimahefa Heriniaina, sekretera jeneralin’ny Fiadidiana ny tanànan’Antananarivo fa tena ilaina ny hetsika toy izao mba tsy haha tompon-trano mihono ny vahoaka ary tokony halain’ny Boriboritany hafa tahaka. Miantso ireo mponina ny tenany nisolotena ny Ben’ny tanàna mba ho avy hitsidika ny hetsika hanamorana ny fahafantarana ireo tolotra sy asa iandreketan’ny kaominina.